တရုတ်နိုင်ငံက ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်မှ ရိုက်ကူးထားသော အင်္ဂါဂြိုဟ်ဓာတ်ပုံအသစ် ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်မှ ရိုက်ကူးထားသော အင်္ဂါဂြိုဟ်ဓာတ်ပုံအသစ် ထုတ်ပြန်
စားသုံးသူရေးရာနစ်နာမှုများ တိုင်ကြားနိုင်မည့် Call Center ချန်နယ်အသစ်တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်အသုံးပြုမည်ဟုဆို
လွှတ်တော် သတင်းယူမည့် သတင်းထောက် ၅၆ ဦးအား နေပြည်တော်၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေး
(၁၂) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အလွတ်သဘော ဗီဒီယိုကွန်ဖရန့်အစည်းအဝေး ကျင်းပ
တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန က G7 ၏ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော ထုတ်ပြန်ချက်အား လက်မခံနိုင်ကြောင်း နှင့် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြား
လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ် “Shenzhou-12” ကို တရုတ်နိုင်ငံက ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် လွှတ်တင်မည်
တရုတ်နိုင်ငံက အားလပ်ရက်အတွင်း ခရီးစဉ် ၁၂၄ သန်း သွားလာခဲ့ဟု ခန့်မှန်း
စာပေအနုပညာ ကဏ္ဍအသီးသီးက ပညာရှင်များ အနုပညာကို အရည်အသွေးမြင့်မားစွာနှင့် လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်က တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ကန်းစုပြည်နယ်ရှိ မိုင်ကျီးဆန်းတောင်နံရံပေါ်က ရှေးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် လက်ရာများစွာတည်ရှိရာ ကျောက်လိုဏ်ဂူများ
တရုတ်နိုင်ငံ ရထားလမ်းက ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ တရုတ်နှင့် ဥရောပကြား ကုန်သွယ်ရေးပင်မလမ်းကြောင်း ဖြစ်လာ
တရုတ်နိုင်ငံက ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်ကို ဘုံသာယာဝပြောမှုအတွက် သရုပ်ပြဇုန်အဖြစ် တည်ဆောက်မည်
တရုတ်-ဗဟိုနှင့်အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် လက်တွေ့မျက်မြင်အကျိုးရလဒ်များ ဖြစ်ထွန်းခဲ့
တရုတ်-ဥရောပ လက်ဖက်သီးသန့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရထား တရုတ်နိုင်ငံ ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ရိဝူးမြို့မှ စတင်ပြေးဆွဲ
တရုတ်- ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း နင်းဘိုမြို့၌ ကျင်းပ
ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတရှီတိုက်တွန်း
တရုတ်နိုင်ငံက ပြောင်းရွှေ့သွားလာနေသော ဆင်အုပ် အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ ဦးတည်သွားလာနေ
တရုတ်နိုင်ငံက ငလျင်ဒဏ်သင့် ယူနန် နှင့် ချင်းဟိုင်းပြည်နယ်များသို့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့
တရုတ်နိုင်ငံ တိဗက်ဒေသရှိ ဧဝရတ်တောင် ပန်းဥယျာဉ်
တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်က အမေရိကန်အနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ရှင်းလင်းစွာနှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအား ပယ်ဖျက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြား
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတ က တရုတ်နိုင်ငံ မှ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တရုတ်-အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ်(၃၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အထူးအစည်းအဝေး တက်ရောက်
တရုတ်နိုင်ငံက အနာဂတ် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထား
“ထျန်းဝန်-၁” အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်သည့် ပထမအသုတ် သိပ္ပံဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများ ထုတ်ပြန်ပြသ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်စူးစမ်းလေ့လာရေး အပြည့်အဝ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့
ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်သစ် တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဒေသတွင် တွေ့ရှိမှုကို သိပ္ပံပညာရှင်များ အတည်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံက လူလိုက်ပါနိုင်သော အာကာသယာဉ် Shenzhou-12 လွှတ်တင်ရန်ပြင်ဆင်
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် လွိကျင်းမြို့နယ်လေး၏ တောင်ပတ်လမ်း ၇၂ ကွေ့
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်အားလုံးတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်- နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးစင်တာများ လွှမ်းခြုံနိုင်မည်
တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွန်းအားပေး
တရုတ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂၁ မျိုး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်ထဲသို့ ရောက်ရှိ
ကိုလံဘီယာရှိ တပ်စခန်းတစ်ခု ကားဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွား လူ ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
အပစ်ခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ပထမဆုံးကြိမ်အဖြစ် အစ္စရေးက ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်
တရုတ်နိုင်ငံက အာကာသ၌စခန်းတည်ဆောက်ရန် Shenzhou-12အာကာသယာဉ်မှူးများအားမိတ်ဆက်
ကျောက်မီးသွေးမိုင်းတွင်းလုံခြုံရေးကို စစ်ဆေးပေးမည့် Wall-E စက်ရုပ်လေး
ရှန်ဟိုင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်လေ့လာရေး ကိရိယာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ ငလျင် လှုတ်ခတ်ရာ ဆူနာမီအသေးစား ဖြစ်ပေါ် ၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီး
ကွန်တိန်နာသင်္ဘောမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ ကမ်းခြေတွင် ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများ ထပ်မံသေဆုံး
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဆေးဝန်ထမ်း(၅)ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို ကုလသမဂ္ဂ ပြင်းထန်စွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
ဂျေရုဆလင်တွင် ပြုလုပ်သော အစ္စရေးချီတက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ဂါဇာနယ်စပ်တွင် ပါလက်စတိုင်းများစုရုံးဆန္ဒပြ
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်နျူကလီးယား ဆွေးနွေးမှုတွင် မဖြေရှင်းနိုင်သေးသည့် ကိစ္စရပ်များ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ပြောကြား
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ် ဘန်းနက် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို ၊ နေတန်ရာဟု၏ ၁၂ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်း၍ အစွမ်းထက်မှုရှိသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း လာအိုဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ လူနှင့်ဆင် ပဋိပက္ခကြောင့် ၆ လအတွင်း လူ ၅၅ ဦးသေဆုံး
လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ပြည်သူ ၃,၀၀၀ ကျော် ထိခိုက်
တရုတ်နိုင်ငံက ဖီဂျီနိုင်ငံ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်တွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်း ထိရောက်ရှိလာ
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှားက အမေရိကန်အား “ မီးနှင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန်” ပြောကြား
နေတိုး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ပေါ်တွင် ကင်းလှည့်
ချီလီနိုင်ငံတွင် အသက် ၂၀ နှစ် နှင့် ၂၁ နှစ်ကြားရှိသူများကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း စတင်
စီရော်နယ်ဒို က မည်သည့်အရာမှ ပေါ်တူဂီအသင်း ဗိုလ်စွဲခြင်းကို တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြား
ရုရှားနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ရန် ဆန္ဒမရှိ၊ ဂရုပြုနေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပူတင်နှင့် အထူးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ဘိုင်ဒန် ပြောကြား
နေတိုးထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် အာဒိုဂန်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် က G7 ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ငွေကြေးကတိပြုချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်း
G7ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးဆုံး ကာကွယ်ဆေး လှူဒါန်းမည့် ကတိပြုချက်မှာ နှေးကွေးနောက်ကျနေ
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဂူတာရက်စ်အား အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ထောက်ခံ အတည်ပြု
FAO ၏ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းညွှန်းကိန်းမှာ မေလတွင် ၁၂ လဆက်တိုက်အဖြစ် စံချိန်တင်မြင့်တက်
သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားများက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း FAO အစီရင်ခံစာအသစ် မီးမောင်းထိုးပြ
ချီလီနိုင်ငံသမ္မတ က တရုတ်နိုင်ငံမှ CanSino COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
မက္ကဆီကို နိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် COVID-19 ကြောင့် အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်သန်းကျော် ပိတ်သိမ်း
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကို နိုင်ငံခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအား လက်မခံပယ်ချကြောင်း ကျူးဘားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
အကျဥ်းထောင်အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုသည် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းနှင့်ဆက်စပ်ဟု အီကွေဒေါနိုင်ငံဆို
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် အပူလှိုင်းကျရောက်မှု ၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှု နှင့် တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ရင်ဆိုင်နေရ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယူကရိန်းနိုင်ငံအား ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ တန်ဖိုးရှိ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများထောက်ပံ့ပေးအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် မြို့တော် တွင် သေနတ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံးလူ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လိုအပ်ချက် လျော့ကျလာသဖြင့် J&J COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများမှာ သက်တမ်းလွန်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း NBC သတင်းကဖော်ပြ
အမေရိကန် နိုင်ငံ က ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲ စတင်လိုက်ခြင်း သည် သူတစ်ပါး အား ထိခိုက်ယုံသာမက မိမိ နိုင်ငံ တွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေမည်
Science & Technology မြန်မာ-ENG
China Science & Technology မြန်မာ-中文
China Science & Technology မြန်မာ-ENG
Science & Technology မြန်မာ-中文
ပိတ်ဆို့မှုများကို မဖျက်သိမ်းပါက နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းမှ ရုရှားနုတ်ထွက်မည်ဟု ဆို
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် 6G ကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်း
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအားလုံး ဖောက်လုပ်ပြီးစီး၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မောင်းနှင်ပြေးဆွဲနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် “ရေအောက် မဟာတံတိုင်း” ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
တရုတ် အမျိုးသားအာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က ထုတ်ပြန်လိုက်သော ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်၏ orbiter ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရုပ်ထွက်မြင့်မားသည့်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံအသစ်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- China National Space Administration/Handout via Xinhua)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်အမျိုးသားအာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်က ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံအသစ်တစ်ပုံကို ဇွန် ၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံတွင် ဂြိုဟ်နီကြီး၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်သည့် ပလက်ဖောင်းကို ပြသထားကြောင်း သိရသည်။ဇွန် ၂ ရက် ပေကျင်းစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီက ထျန်းဝန်-၁ ၏ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရုပ်ထွက်မြင့်မားသည့်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော အဆိုပါ ဓာတ်ပုံတွင် အပေါ်ဘက်ထောင့်နားတွင် ထောက်ပသော အကွက်နှစ်ခုကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ချိုင့်အကြီးတစ်ခုမှာ ယာဉ်ဆင်းသက်သော ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး အသေးတစ်ခုမှာမူ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွား Zhurong ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း CNSA က ပြောခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ် (orbiter) ၊ ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ် (lander) နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် (rover) တို့ကို ပေါင်းစည်းထားသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းဝန်-၁ မစ်ရှင်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ rover အား သယ်ဆောင်ထားသော lander သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ကျယ်ပြန့်သောကွင်းပြင် Utopia Planitia ၏ တောင်ဘက်ခြမ်း၌ မေ ၁၅ ရက်က ဆင်းသက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Zhurong ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ရှိ ယာဉ်ဆင်းသက်ရာပလက်ဖောင်းမှ မေ ၂၂ ရက်တွင် ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေးစတင်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်ပြီး လှည့်လည်သွားလာရန် အမေရိကန်နိုင်ငံပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယာဉ်ဆင်းသက်ရာပလက်ဖောင်းအနီးဝန်းကျင်တွင် မည်းမှောင်နေသောဧရိယာမှာ ဆင်းသက်စဉ် အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ယာဉ်ဆင်းသက်ရာပလက်ဖောင်း၏ မြောက်-တောင်လမ်းကြောင်းရှိ တောက်ပသော အချိုးညီညီအကွင်းများမှာ ယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးနောက် ကျန်ရှိသောလောင်စာဆီကို ယာဉ်ဆင်းသက်ရာပလက်ဖောင်းပေါ် စွန့်ပစ်စဉ် အမှုန်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း CNSA က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ၏ အလယ်ဗဟိုရှိ တောက်ပသော အကွက်များမှာ entry capsule ၏ နောက်အဖုံးနှင့် ယာဉ်ဆင်းသက်စဉ် လေထီးစွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံ၏ အောက်ဘက် ဘယ်ဘက်ရှိ နောက်ထပ် တောက်ပသောအကွက်မှာမူ entry capsule ၏ အပူကာဖြစ်ကြောင်း CNSA က ပြောခဲ့သည်။
ဇွန် ၆ ရက်အထိ ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် Zhurong သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရန်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက် ရွေ့လျားရန်နှင့် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာမှု ဆောင်ရွက်ရန် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိရက် ၂၃ ရက်ကြာ အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိတစ်ရက်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်ရက်ထက် မိနစ် ၄၀ ကျော်ကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။
Rover နှင့်အတူပါရှိသော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများအားလုံးသည် အချက်အလက် စုဆောင်းရန် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် Zhurong သည် တရုတ်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီတွင် မီးနတ်ဘုရားပြီးနောက် နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မစ်ရှင်၏ နာမည်သည် ဂြိုဟ်နီကြီးအား တရုတ်နာမည် Huoxing (မီးဂြိုဟ်) ဖြစ်ပြီး မိုးကောင်းကင်သို့မေးခွန်းများဟု ဆိုလိုသည်။ ယင်းနာမည်မှာ (ဘီစီ ၃၄၀-၂၇၈ ခန့်) က တရုတ် ကဗျာဆရာ Qu Yuan ၏ ကဗျာတစ်ပုဒ် ခေါင်းစဉ်လည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်နေ့ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မနည်းသက်တမ်းနှင့်အတူ Zhurong သည် ရုပ်ထွက်မြင့်မားသော သုံးဘက်မြင်ကင်မရာဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်အခင်းအကျင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ဂြိုဟ်မျက်နှာ ဖွဲ့စည်းမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Zhurong သည် ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိတည်ဆောက်ပုံနှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းကို လေ့လာခြင်း၊ ရေခဲသဲလွန်စများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ မိုးလေဝသပတ်ဝန်ကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်နှစ်တစ်နှစ် သက်တမ်း (ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ ရက်ပေါင်း ၆၈၇ ရက်ခန့်) ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော orbiter သည် ၎င်း၏ သိပ္ပံနည်းလမ်းကျ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် rover အတွက် ဆက်သွယ်ရေးများ အစားထိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, June7(Xinhua) — The China National Space Administration (CNSA) Monday releasedanew image taken by the Tianwen-1 probe, showing the country’s first Mars rover and its landing platform on the red planet’s surface.
In the image, taken byahigh-resolution camera installed on the orbiter of Tianwen-1 at6p.m. on June2(Beijing Time), two bright spots are visible in the upper right corner. The larger one is the landing platform, and the smaller one is the Zhurong Mars rover, the CNSA said.
China’s Tianwen-1 mission, consisting of an orbiter,alander, andarover, was launched on July 23, 2020. The lander carrying the rover touched down in the southern part of Utopia Planitia,avast plain in the northern hemisphere of Mars, on May 15.
The rover Zhurong drove down from its landing platform to the Martian surface on May 22, starting its exploration of the red planet, and making China the second country after the United States to land and operatearover on Mars.
The dark area surrounding the landing platform might be caused by the influence of the engine plume during landing. The symmetrical bright stripes in the north-south direction of the landing platform might be from fine dust when the landing platform emptied the remaining fuel after landing, the CNSA said.
The bright spots in the center of the image are the back cover of the entry capsule and the parachute jettisoned during the landing. Another bright spot in the lower left of the image is the heat shield of the entry capsule, the CNSA said.
As of June 6, the rover Zhurong has been working on the surface of Mars for 23 Martian days to detect the environment, move around the surface, and carry out scientific exploration. A Martian day is approximately 40 minutes longer thanaday on Earth.
All scientific equipment aboard the rover is turned on to collect data.
The rover Zhurong is named after the god of fire in ancient Chinese mythology. The name echoes with the Chinese name for the red planet, Huoxing (the fire planet), while the name of the mission, Tianwen, means Questions to Heaven. It is the title ofapoem by the ancient Chinese poet Qu Yuan (circa 340-278 BC).
With an expected lifespan of at least 90 Martian days (about three months on Earth), Zhurong will record the Martian landscape with high-resolution three-dimensional images and analyze the material composition of the planet’s surface. It will also detect its sub-surface structure and magnetic field, search for traces of ice and observe the surrounding meteorological environment.
The orbiter, withadesign life of one Martian year (about 687 days on Earth), will relay communications for the rover while conducting its own scientific detection operations. Enditem
A new image released by the China National Space Administration (CNSA), taken byahigh-resolution camera installed on the orbiter of Tianwen-1 at6p.m. on June2(Beijing Time), shows the landing platform and the Zhurong Mars rover on the Martian surface. The CNSA on Monday releasedanew image taken by the Tianwen-1 probe, showing the country’s first Mars rover and its landing platform on the red planet’s surface. (China National Space Administration/Handout via Xinhua)
လစ်ဗျား ကမ်းရိုးတန်းတွင် လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ ၅၅၇ ဦးကို ကယ်တင်ခဲ့ရ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၌ ဓာတ်ငွေ့အိုးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ လူ ၈ ဦးသေဆုံး၊ ၅ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် COVID-19 စစ်ဆေးရေး နမူနာများကို အလိုလျှောက် လွှဲပြောင်းစစ်ဆေးသည့် စနစ်ဖြင့် ပထမဆုံးအသုံးပြု